Warkii Radio Xoriyo : 01 July,2003
-Madaxweynaha Jwxo, oo u Hambalyeeyey Ummadda Soomaaliyeed
-Shir Sanadeedkii Jaaliyaadka Ogaadeenya oo Guul Ku Dhamaaday
-Abaabul Balaadhan ooy Jwxo,ka Wado Waqooyiga Ameerika
-Xaalada Shirka Dib u Heshiineed ee Kooxaha Soomaalida.
-Aqoonyahano Soomaaliyeed oo la Kulmay Safiirka Masar
Madaxweynaha Jwxo,Adm.Mohamed Omer Osman isaga oo ku hadlaya Magaciisa ka Gudida Fulinta,Ka Golaha Dhexe,Ka Xubnaha Jwxo,iyo Midka Shacbiga Ogaadeenya,wuxuu hambalyo ku aadan Munaasibadaha Maalmaha Xoriyada ee 26ka,27ka June,iyo 1da July u dirayaa dhamaan Ummadda Soomaaliyeed Meel ay joogtaba isagoo u rajaynaya in uu Eebe Sanadkan kiisa kale ku gaadhsiiyo Nabad,Barqaaqo,iyo Caafimaad,Wuxuuna Madaxweynuhu ugu baaqay dhamaan Kooxaha Soomaaliyeed in ay dhameeyaan khilaafaadka u dhaxeeya ooy ku heshiiyaan Shirka ay haatan u fadhiyaan ee dib u heshiisiinta.
Sidoo kale Xoghayaha Guud ee Jwxo,Mudane Mohamed Ismail Omer ayaa isna isagoo ku hadlaya Magaca Shacbiga Ogaadeenya iyo Ka Jwxo,u dirayaa Hambalyo dhamaan Qaybaha sare ku xusan.Waxayna ugu danbayntii ugu Baaqayaan Shacbiga Soomaalida Ogaadeenya in ay ku dhiiradaan sidii ay Xaqooda maqan uga soo dhacsan lahaayeen Gumeysiga Itoobiya ee kula dhaqma Siyaasada Xaqiraada iyo Duliyeynta ku dhisan.
Dhanka kale wararka naga soo gaadhaya Jamhuuriyada Soomaaliyeed ayaa sheegaya in si balaadhan looga Xusay maalmaha Xoriyada ee 26ka,27 Juun iyo 1da Luuliyo inta badan Degmooyinka iyo Gobalada Soomaaliyeed ooy ku jiraan Caasimahada.Maalmahaas oo kulmiya Xoriyad ay qaar ka mida Gobaladii Soomaaliyeed ee Gumeystayaasha Caalamiga ahi kala ay Xoriyada heleen, kuwaas oo lama ilaawaan ah.
Shir Sanadeedkii Jaaliyaadka Ogaadeenya ee Sanadkan oo Guul Ku Dhamaaday
Shir Sanadeedkii Jaaliyaadka Ogaadeenya ee Sanadkan oo ka dhacay Magaalo Madaxda Wadanka Sweden ee Stockhlem oo socday intii u dhaxaysay 27-29 June,2003,ayna ka soo qayb galeen Ururo Caalami ah,Aqoon yahano khibrad u leh Geeska Afrika,Jaaliyaadka Ogaadeenya ee Dunida,Madax Sare oo Jwxo, iyo Qaar ka mida Shacbiga Soomaaliyeed ayaa Guul ku dhamaaday waxaana ka soo baxay Goáano Dhaxal Gal ah.
Hadaba Waxaa dhambaal arintaas Xambaarsan inoo soo diray Wariye Ahmed Gaal-Eri.
SHIWAYNAHA 9AAD EE JAALIYADAHA SOOMAALIDA OGAADEENIYA, STOCKHOLM, 27 - 29 JUUN 2003
Bayaanka Shiwaynaha 9aad ee Jaaliyadaha Soomalida Ogaadeeniya
Shirwayanaha Jaalliyadaha Soomaalida Ogaadeeniya, oo ah shirwayne sannadkiiba mar la qabto, waxaa sannadkan lagu qabtay magaalada Stockholm ee dalka Swedan. Shirwaynuhu wuxuu sannadkan lahaa labo waji. Wuxuu maalintii kowaad lahaa waji Caalami ah, waxaana lagaga hadlay arrimo la xidhiidha horumarinta iyo xallinta khilaafaadka, luuqada Ingiriisiga ayaana lagu socodsiinayay.
Labadii maalmood ee kale waxay ergooyinku ka doodeen qodobo muhiim ah oo ku saabsan dhibaatada Ogaadeeniya, waxaa sidoo kale la dhageystay khudbado ay soo jeediyeen aqoonyahanno waaya-aragnimo u leh arrimaha Geeska Afrika, gaar ahaan arrimaha dalka Ogaadeeniya.
Shirwaynaha waxaa ka soo qayb galay ergooyin ka kala socda Jaalliyadaha dalalka Norway, Denmark, Finland, Jarmalka, Britain, Canada, Australia iyo Jaaliyaddii Shirwaynaha martigelisay ee Swedan. Waxaa kaloo Shirwaynaha waraaqo u soo diray Jaaliyadaha dalalka Koonfur Afrika, Suudaan iyo Imaaraadka Carabta.
Shirwaynaha waxaa kaloo ka soo qayb galay masuuliyiin ka tirsan Jabhadda Waddaniga Xoraynta Ogaadeeniya iyo wakiillo ka socda hay'ado kala duwan oo u dhashay dalka Sweden. Sidoo kale waxaa Shirwaynaha ka soo qayb galay wakiillo ka socda Ururro Xuquuqul Insaan ah iyo aqoonyahaniin ka tirsan Jaamacadaha Uppsala iyo Malmö ee dalka Swedan. Waxaa kaloo door fiican Shirwayanaha ka qayb-qaatay culimada.
Ka dib markii si aad ah looga dooday qodobbadii Shirwaynaha la soo hordhigay, waxaa la gaadhay go'aamadan hoos ku qoran:
1-In la horumariyo dhismaha Jaaliyadaha Ogaadeeniya, isla-markaana la xoojiyo wax qabadkooda.
2-In la taageero halganka ay Soomaalida Ogaadeeniya ugu jiraan hanashada xaqa Aaya- Ka- Tashigooda.
3-In la adkeeyo abaabulka iyo midnimoda dadkeena meel kastoo ay joogaan.
4-In la sameeyo ilo dhaqaale oo joogto ah, sida: Shirkado, Goobo Ganacsi… IWM.
5-In kobcinta dhaqaalaha loo adeegsado ururinta sakooyinka, sadaqada iyo taburrucaadka masaajidda, xafladaha iyo goobaha caamka ah.
6-In maalqabeennada u dhashay dalka Ogaadeeniya lagu baraarujiyo inay halganka ku bixiyaan dhaqaale dheeraad ah.
7-In Jaaliyadaha Ogaadeeniya ee ku dhaqan dalalka Woqooyiga Ameerika, Yurub iyo Australia ay middii waliba diyaariso 100 xubnood, oo xubin waliba uu bishii bixiyo 25 doollar, kuwaasoo ayna ku jirin xubnaha bixiya boqolka xorriyada.
8-In laga hortego, lana fashiliyo shirqoollada uu cadowgu maleegayo ee uu iskaga horkeeno dadkeenna.
9-In qadiyadda Ogaadeeniya saaxiibo looga kasbo shucuubta lala nool yahay, iyadoo qaabka ugu habboon loogu bandhigayo dulmiga iyo cadaadiska lagu hayo Soomaalida Ogaadeeniya.
B-Shirwaynuhu wuxuu Soomaalida Ogaadeeniya, meel kastoo ay joogaan, ugu baaqayaa inay ku mintidaan halganka xaqa ah ee Aaya-Ka-Tashigooda ay ugu jiraan.
T-Shirwaynuhu wuxuu shucuubta, dawladaha iyo ururrada caalamiga ah ugu baaqayaa inaanay iska indho-tirin xadgudubka, dulmiga iyo cadaadiska uu gumaysiga Itoobiya ku hayo dadweynaha Soomaalida Ogaadeeniya iyo shucuubta kale ee ku hoos jirta.
J-Shirweynuhu wuxuu Jabhadaha Gobonimadoonka ah & Xooggagga ka soo horjeeda gumeysiga Itobiya ugu baaqayaa inay u midoobaan cadowgooda.
X-Shirwaynuhu wuxuu dadweynaha Soomaaliyeed ugu baaqayaa inuu khilaafaadkiisa si nabadgelyo ah u xallisto, isla markaana ka hortagaan shirqoollada ay xukuumada Itoobiya u maleegayso
B-Shirwaynuhu wuxuu canbaaraynayaa fikirka gaboobay ee gumaysiga Abasiiniya ee ku dhisan cadaadinta shucuubta kale, dhul-ballaadhsiga iyo falalka waxshinimada ah ee dilka, xasuuqa, dhaca iyo xabsiga ee uu ku hayo dadweynaha Soomaalida Ogaadeeniya ee dulman.
T-Shirweynuhu wuxuu canbaaraynayaa argagixisada caalamiga ah iyo siyaasadda argagixisada ku dhisan ee dawladda Itobiya.
J-Shirwaynuhu wuxuu canbaaraynayaa xidhitaanka ay xukuumada Itoobiya xidhay xadka u dhexeeya Soomaaliya iyo Ogaadeeniya iyo abaaraha ay u adeegsanayso siyaasad ay kula dagaallanto dadwaynaha soomaalida Ogaadeeniya ee diiddan heeryada gumaysiga Itoobiya.
X-Shirwaynuhu wuxuu canbaaraynayaa fargelinta qaawan ee xukuumada Itoobiya ay ku hayso dawlada Soomaaliya iyo shirqoollada lidka ku ah shirka dib-u-heshiisiinta Soomaaliyeed ee ka socda dalka Kenya.
STOCKHOLM, SWEDAN 27 - 29 JUUN 2003
Waxaad dhambaalkaas oo faah faahsan ku maqli doontaan Ideecadeena Caawa,Warka kadib.
Wariyaha Raadiyo Xoriyo uga soo Warama Wadanka Maraykanka Mohamed Nuur Abaas ayaa inoo soo sheegay Abaabul balaadhan oo Jwxo,ka wado Waqooyiga Ameerika kaas oo hada ka socda Wadanka Maraykanka,wuxuuna ku bilowday
Iyadoo ay baryahanba Booqashooyin Abaabul iyo Wacyi galin ah ku kala bixinayeen Gobolo kala duwan oo ka tirsan Dalka Maraykanka Wafti Jwxo,ah ooy Hogaaminayaan Halgama yaasha kala ah, Xassan Ciise (Sheekeeye), iyo Maxamed Kaahin ayaa waxay booqasho hawleed maanta oo ah 01 Julay,2003 ugu amba baxeen Gobolada Washignton Seatle, iyo Origon oo ay kula kulmi doonaan Jaaliyadaha Ogaadeenya ee ku nool Gobaladaas.Waxayna Jimcaha, Sabtida, iyo Axada kulamo la yeelan doonaan Jaaliyaadka Ogaadeenya ee Origon iyo Washington Seatle. Goboladaas ka dibna waxay mari doonaan Gobolada kala ah Maine, iyo Colorado. Waftigan ayaa bulshada kala hadli doona arimo la xidhiidha Halganka ka socda Ogaadeenya, warbixino kala duwana ka siin doona Xaalada dhabta ah ee ka jira Ogaadeenya,siiba dhibaatooyinka uu Gumaysiga Itoobiya ku hayo Shacbiga Ogaadeenya, Geedi socodka Halganka ay JWXO Majaraha u hayso, iyo Guud ahaan xaalada Geeska Afrika.Waftigu wuxuu u soo bandhigi doonaa Jaaliyadaha ay la kulmayaan; warbixino isugu jira, Maqal iyo Muuqaal.
Booqashooyinka waftigan sida ay u sheegeen Wariye Cabaas Xubnaha Wafdigu,ayaa ah mid wacyi galinta, abaabulka, iyo xogwaran loogu tala galay in Jaaliyadaha Ogaadeenya ee Maraykanka oo iyagu aad uga fog dalkoodii hooyo,ay tahay in lagaga haqab tiro hadba Marxaladaha ka jira, iyo meesha uu Halganka Xoriyad Doonku Marayo.Sidoo kale Waftiga ayaa la yeelan doona Waraysiyo iyo xog waran, dhagaysana doonana Warbixinada Jaaliyadaha iyo kaalinta ay kaga jiraan Halganka Waxayna ka soo uruurin doonaan wixii warbixin iyo talo ah ee Jaaliyaduhu ay rabaan in loo gudbiyo Hogaaminta JWXO.i
Maxamed N. Axmed Cabaas
Xaalada Shikra Dib u Heshiineed ee Kooxaha Soomaalida
Wararka ugu danbeeyey ee Radio Xoriyo ka soo gaadhaya Shirka dib u heshiisiinta Soomaaliyeed ee Kooxaha kala duwan uga socda duleedka Magaalo Madaxda Wadanka Kenya ee Nairobi ayaa sheegaya xaaladahan
Guddoomiyaha Shirka Dib u Heshiisiinta Kooxaha soomaaliyeed ahna Ergayga Dawladda kenya u qaabilsan arrimaha Soomaaliya ayaa 30 June,2003 ka dhawaajiyey in uu shirka dib u heshiisiinta Soomaalidu sii socon doonno maadaama uusan wali dhamaan khilaalkii u dhexeeyey Hoggaamiye kooxadyadda ka qeybgalaya Shirka.Wuxuuna intaas raaciyey in aan wali la xalin khilaafyo yar yar oo u dhaxeeyey Kooxaha isagoo sheegay in uu isku dayi doono in uu meel dhexe isugu keeno.
Waxyaalaha layku af garan laýahay ayaa waxaa sal u ah tirada Baarlamaanka Dawlada Federlaaka ah ah ee Soomaaliyeed ooy qaar doonayaan in ay noqdaan 450 halka ay kuwo kalena ka rabaan in ay ahaato 250 Mudane.Waxaana Goobta Shirka Banaanbax ku sameeyey Ururada Bulshada Rayadka ah,iyagoo ka cabanaya kordhinta wakhtiga iyo heshiis laáanta.
Aqoonyahano Soomaaliyeed oo la Kulmay Sariirka Masar ee Soomaaliya Fadhigiisu yahay
Aqoonyahano Soomaaliyeed oo ku nool dalka Ingiriiskla ayaa Nairobi kula kulamay 29 June,2003 Safiirka Soomaaliya u jooga Dalka Masar, Mudane Salah Halim.Aqoonyanahdaas oo u sameeyey Safiirka Casho Sharaf ay soo abaabuleen ayey uga mahad celiyeen Safiirka xafiiskiisa wali ku yaala Magaalada Muqdisho, taas oo ay ku tilmaameen geesinimo.
Safiirka ayaa dhiniciisa muujiyay sida uu ugu farax sanyahay dadaalka ay muujiyeen Aqoonyahanda dibada ka yimid, waxuuna ku booriyay in ay dadaalkooda halkaas ka sii wadaan kuna dadaalaan sidii xal loogu heli lahaa Colaadan 13 jirsaya ee aan wajiga laheeyn. Safiirku waxuu kaloo ku nuuxnuuxsaday in Shirku uusan xawli ku socon sababo badan daraadeed waxuuna ka codsaday Soomaalida inay yeeshaan moowqif mideeysan iyada oo la fiirinayo danta guud ee Shacabka, waxuuna u soo jeediyay in ay ka maarmaan gacan shisheeye oo maamusha
Dhagaystayaal Warkii ood ka dhagaysanayseen Radio Xoriyo Codkii Shacbiga Ogaadeenya Caawa waa naga intaas,waxaana idinku wareejin Wariye Abdi Madaale oo inoo sii wada Ideecadeena inta ka dhiman.
Radio Xoriyo,01 Julay,2003